2021 Dhalashada Saint Kitts iyo Nevis
Sharafta dabiiciga ah iyo khadadka xeebta ee bacaadka ah ee Saint Kitts iyo Nevis hubaal waa qurux iyo meel cajiiba oo ku taal Kariibiyaanka.
Cimilada kuleylka ah ee jasiiradaha noocan ah, biyo nadiif ah ayaa soo jiita dalxiisayaasha waxayna kobciyaan horumarka ganacsiga dalxiiska Saint Kitts iyo Nevis waxay la socdaan duullimaadyo toos ah oo ka yimaada Yurub iyo Mareykanka, sidaa darteed joogitaanka jasiiraddan waxay siisaa faa'iidooyin gaar ah codsadayaasha dhalashada.
helitaanka dhalashada muddo aan ka badnayn 2 bilood;
xuquuqda helitaanka dhalashada carruurta ka yar 30 sano, waalidiinta ka weyn da'da 65;
shuruudaha degenaanshaha dalka;
maqnaanshaha shuruudaha joogitaanka shakhsi ahaaneed marka la dalbanayo arji;
waajib kuma aha in la dalbado fiiso lagu galayo dhulka 155 dal, oo ay ku jiraan aagga Schengen, Great Britain, Hong Kong, Singapore;
ka dhaafida cashuurta qaab dakhliga adduunka;
diiwaangelinta dukumiintiyada rasmiga ah (baasaboor) Saint Kitts iyo Nevis muddo aan ka badnayn 2 bilood.
Hababka loo helo dhalashada Saint Kitts iyo Nevis:
1. Waxqabadka maalgelinta iyada oo loo marayo tabarucaad loogu talagalay Sanduuqa Taakulaynta Dadka Dhibbanayaasha Duufaannada - dabeecadda aan la soo celin karin ee tabarucaadka:
$ 150 kun - codsadaha tooska ah;
$ 150 kun - oo loogu talagalay qoys ka kooban 3 qof (xaaska / sayga ama sayga oo lagu daray 2 carruur ah oo da'doodu ka yar tahay 18);
$ 25 kun - qofka xigta ee daryeelka ku jira.
2. Maalgelinta sanduuqa sonkorta (SIDF) - dabeecadda aan la soo celin karin ee tabarucaada.
$ 250 kun - codsadaha tooska ah;
$ 300 kun - oo loogu talagalay codsadaha weyn iyo 3 ku tiirsan;
$ 25 kun - oo loogu talagalay dadka xiga ee ku jira daryeelka.
3. Hanti ma guurto
Qiimaha iibsiga dhismaha waa inuu ahaadaa ugu yaraan $ 400 kun. Hantida ma guurtada ah waa inay lahaataa ugu yaraan shan sano, dadka maalgashiga ku sameeya guryaha sidoo kale waxay bixiyaan lacagaha cashuurta.
Kharashaadka xaqiijinta ku lug lahaanshaha dembiga:
7 kun 500 $ - codsadaha weyn;
$ 4 - loogu talagalay kuwa ku tiirsan ugu yaraan 16 sano.
Bixinta qaab ujrada gobolka (ee helitaanka dhismaha)
$ 35 - codsadaha guud, kuwa ku tiirsan ugu yaraan 047 sano;
$ 20 - Xaaska / sayga / sayga;
$ 10 - loogu talagalay ku tiirsane dheeraad ah.
Citizenship Saint Kitts iyo Nevis ENG
Jinsiyadaha Saint Kitts iyo Nevis RUS